आफ्नै छोरीलाई गर्भ रोक्ने औषधि खुवाएर ध’म्की दिँदै बाबुले राखे पटक–पटक यौ’नसम्बन्ध Bishal4You
आफ्नै छोरीलाई गर्भ रोक्ने औषधि खुवाएर ध’म्की दिँदै बाबुले राखे पटक–पटक यौ’नसम्बन्ध
अहिलेको कलियुगमा हुने यस्ता केही घटनाहरु छन् जस्लाई सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै एक घटना कपिलवस्तुबाट आएको छ । यहाँ आफ्नै छोरीलाई बाबुले क’रणी गरेको खुलासा भएको छ । छोरीले रुदैँ भनिन, ‘म घरमा थिएँ । बुवाले आमालाई छोरीको स्कूलमा काम छ पठाइदेउ भन्नुभयो । आमाले जाउ भनेपछि म गएँ तर बुवाको अर्कै नियत रहेछ ।
स्कूलमा केही काम रहेनछ, मलाई एउटा होटलमा लिएर जानु भयो र क’रणी गर्नुभयो । त्यस्तो अनैतिक काम गरेपछि बुवाले मलाई औषधी खान दिनुहुन्थ्यो । त्यो औषधी के हो भन्ने मलाई थाहा छैन । अहिले म निकै कमजोर भएकी छु । हिडडुल गर्न पनि सक्दिन । बुवाले त्यस्तो व्यवहार गरेपछि यो औषधी खा भन्नुहुन्थ्यो, मैले खाएँ तर त्यसले के काम गर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन ।’
अहिले ति छोरीको शरिरमा रगतको निकै कमी भएको छ । वुवाले यस्तो गर्नुभयो भनेर उनले आफ्नै आमालाई पनि भन्न सकिनन् । साथीहरुलाई झन कसरी भन्न सक्छु ? उनले प्रश्न गरिन् । मलाई यस्तो अवस्था बनाउने बुवालाई ‘हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । उनले माग गरिन् । यो उमेरले भर्खर १७ वर्ष लागेकी एक छोरीको पुकार हो ।
छोरीचेलीहरु आफ्नै परिवारका सदस्यबाट पनि असुरक्षित छन् भन्ने कुराको यो घटना गत्तिलो उदाहारण हो । अझ आफैले जन्मदिएकी छोरीलाई बुवाले लामो समय देखि क’रणी गरिरहेको सुन्दा आमाको मन कस्तो भयो होला ? त्यो सोच्न नसक्ने कुरा हो । त्यस्तो कुराको शंका पाएपछि आमाले छोरीलाई बारम्बार सोधिन् । धेरै समय सम्म सम्बन्ध राखेको थाहा पाएपछि आमाको होस नै उड्यो । ति महिलाका पतिले आफ्नै १७ वर्षीय छोरीसँग ज बरजस्ती सम्बन्ध राखेर बच्चा नबहोस् भनेर ग र्भनिरोधक औषधि दिने गरेको खुलासा भएको छ । हिन्दु धर्ममा छोरीलाई लक्ष्मीको रुपमा पुजा गर्ने चलन छ ।
तर पुज्नुपर्ने छोरीलाई आफ्नै बाबुले एक पटक होइन बारम्बार त्यस्तो काम गरेको कुरा बाहिर आएको छ । चारवटा छोरी र एउटा छोराका बुवाले आफ्नो १७ वर्षकी जेठी छोरीलाई यस्तो कुर्कम गरेको रहस्य खुलेको हो । छोरीले आफुमाथि भएको त्यस्तो कुरा भन्न नसकेपछि कान्छी बहिनीले आमासंग उनको कुरा खोलीदिएकी थिइन् । कान्छीछोरीले आमा हजुर नभएको बेलामा बुवाले दिदीलाई ढोका र झ्याल थुनेर के के गर्नुहुन्छ भनेर सुनाएपछि आमाले त्यसका बारेमा जानकारी पाएकी थिइन् ।
अहिले आमा छोरीका लागि न्यायको खोजिमा छन् । ति बुवाले घरमा मात्र होइन अनेक वहाना बनाएर घर वाहिर बोलाएर होटलमा कोठा लिएर पनि छोरीसंग सम्बन्ध राखेको खुल्न आएको छ । यस्तो कुरा कसैलाई सुनाए भाईबहिनीको भविष्य विग्रन्छ, म जेलमा गएँ भने तेरो आमाले पनि दुख पाउँछे भनेर ध म्काउने गर्थे । बाबुले दिने गरेको ध म्कीका कारण भाई बहिनीको भविष्य र आमाको दुख सम्झेर कसैलाई केही नभनी चुपचाप आफ्नै जनवाररुपी बाबुको बर्बरता सहँदै आएकी थिइन् । आमाले मिडिया सामु सबैकुरा खोलेपछि बुवाको कर्तुतका बारेमा आफै बोल्छु भनेर उनी मिडियामा आएकी छिन् ।